Somalia oo gebi ahaanba tayo xumo darteed looga saaray qiimaynta waxbarashada caalamka | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Somalia oo gebi ahaanba tayo xumo darteed looga saaray qiimaynta waxbarashada caalamka
Somalia oo gebi ahaanba tayo xumo darteed looga saaray qiimaynta waxbarashada caalamka
(Muqdisho) 18 Okt 2020 – Somalia ayaa gebi ahaanba ka baxday qiimaynta tayada waxbarashada caalamka iyadoo ay jiraan sababo sidaa loo yeelay.
Sida uu sheegayo Golaha Dhaqaalaha Dunidu, waxay Somalia la’dahay kaabayaasha waxbarasho ee asaaska u ah in la helo aqoon tayo leh sida dugsiyada, jaamacadaha iyo daraasaaska sare sida cilmi baarista oo aan lahayn agab, kharash iyo aqoon ku filan.
Waxaa sidoo kale iimaha ay sheegeen ka mid ah in aan la heli karin macallin khibrad iyo aqoon leh oo ku filan inay sare u qaadaan aqoonta dalka, halka kuwa lihina ay aad u yar yihiin isla markaana aanay helin mushahar ku filan.
Marka la eego dalalka Jaamacadda Carabta halka ay qiimaynta ka galeen waxaa koowaad kusoo baxday Qadar, waxaana xiga Imaaraadka oo 10-aad galay.
Waxaa jira dalal ay dagaallo sokeeke iyo dhaqaale xumo la degtey oo iyagana la geliyey liiska dalalka aan la qiimaynin ee ku liita dhanka waxbarashada sida Ciraaq, Yemen, Liibiya iyo Suudaan.
Previous articleGOOGOOSKA: Newcastle vs Man United 1-4, Crotone vs Juventus 1-1, Getafe vs FC Barcelona 1-0
Next articleArmenia oo dal kale oo Muslim ah ku eedaysay inay ciidankiisu ka dagaallamayaan Azerbaijan